Odeeffannoo Afaan Oromoo | Ramsey County
Ulfaa fi talaallii Covid-19
Dhiheessi dhumataa waan jiruuf talaallii bilisaa fi kaardii kennaa Ramzii kaawuntii irraa argadhu.
Talaalliin covid-19 namoota umriin isaanii 5 fi sanaa ol tahe kamiifuu ni jira.
Muddee 9 (3WB - 6WB)
Pfizer 5+ marsaa lammaffaa waraannachuu yokiin madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu / Moderna 18+ madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu.
Muddee 16 (3WB - 6WB)
Pfizer / Moderna 18+ madinummaa ol guddifachuuf waraannachuu.
Muddee 16 Guutuu: Maaloo irra deebii beellamni banaa tahuu isaa mirkaneessi.
Muddee 11 (3WB - 6WB)
Muddee 11 Guutuu: Maaloo irra deebii beellamni banaa tahuu isaa mirkaneessi.
Muddee 8 (3WB - 6WB)
Muddee 15 (3WB - 6WB)
Qorannoo qaama alagaa hatattamaa
Bu’aan qorannoo sa’aatii 24 hanga 72tti.
Namoota mallattoo qabanii fi hin qabneefiis.
Waa’ee Qorannoo PCR ballinaan baradhu.
Funyaan keessa haxaawuu.
Bu’aan sa’aatii tokkoo hanga sadiitti.
Namoota mallattoon irratti mullatteef.
Waa’ee qorannoo qaama alagaa hatattamaa baradhu.
Qorannoo hancufaa. Qonannoo hatattamaa.
Cufame: Muddee 24, 25, 31.
Cufame: Amajjii 1.
Wixataa- Jimaataa: WD sa’aa 11- WB sa’aatii 6tti
Beellama qabadhu yokiin Kallattiin dhufuun.
Wixataa- Jimaataa sa’aa 11 WD - 7 WB
Sanbataa-Dilbataa Sa’aatii 11 WD - 4 WB
Wixataa- Jimaataa sa’aa 11 WD - 6 WB
Cufame: Muddee 1-3, 24, 25, 31.
Guyyaa hunda: WD sa’aatii 7- WB sa’aatii 7tti banaadha.
Mallattoo iddoo qorannaa sana geessan kan gulantaa 2ffaa bakka Dhaabaa konkolaataa (Blue parking Ramp) gubbaa jiran hordofi.
Bakki dhaabaa konkolaataa kan bilisaa jira.
Gara illiveetaraatti deemuun mallattoo bakka kilinikaa sana nama geessan hordofi.​
Cufame: Muddee 1-6, 24, 25, 31.
Wixataa- Kamisaa: WD sa’aa 11- WB sa’aatii 6tti.
Sanbata: WD sa’aa 11-WB sa’aatii 4tti.
Roobii-Jimaataa sa’aatii 11 WD - 6 WB
Sanbata sa’aatii 11 WD - 4 WB
Iddoolee hawaasaaf qorannaan itti godhamu barbaadi.
Haguuggii fuulaa bilisaa barattootaa fi maatiif
Hamma(size) gaditti argaman kun ni jiru:
Daa’imman umriin isaanii waggaa 0-3.
Ijoollee xixiqqoo umriin isaanii waggaa 4-7
Ijoollee jiddugaleessa umriin isaanii waggaa 8-10.
Dargaggoo/Ijoollee umriin isaanii waggaa 11+.
Dargaggoo umriin isaanii waggaa 16+.
Dargaggoo umriin isaanii waggaa 18+.
Sarara Kallattii, Toora (Weebsaayitii) Odeeffannoo
Sararoota bilbilaa gaaffilee waa’ee COVID-19 deebisuuf gargaaran.
Wiirtuu Qunnamtii Maamilaa
Odeeffannoo waa’ee COVID-19 fI tajaajilawwan Ramsey County.
651-266-8500 (Wiixataa – Jimaataa, 8 a.m. - 4:30 p.m.)
Sarara bilbilaa gargaarsaa kan Minesootaa
Gaaffilee weerara COVID-19’n wal-qabataniif.
651-297-1304, 1-800-657-3504 (Wiixataa – Jimaataa, 8 a.m. - 4 p.m.)
Sarara bilbilaa COVID-19 kan baqattoota fi godaantotaa
651-318-0989 (Wiixataa – Jimaataa, 9 a.m. - 5 p.m.)
Addaan qooduu sararaa gargaarsaa
Toora (Weebsaayitii) Odeeffannoo
#StaySafeMN media in Oromo - Minnesota Governor's Office
Odeeffannoo Dhukkuba koroonaa irratti Waajjirri Ramsey County fi Dhaabbileen Hawaasummaa qopheessan.
Ittisi daddarbina COVID-19
Ittisi daddarbina COVID-19 (8.5x5.5)
Akkmiti hoo'a qama lakkofta?
COVID-19 ilaalchisee jijjiiramoota hawwaasa baqattootaa fi jiraattota biyya alaatii dhufan tuqan
Bakka Nyaata Tolaa ‘Food Shelf’
Bakka Nyaatni Tolaa Argamu
COVID-19 dhaaf qophaa’uu
Ergaa Ijoo Waayee COVID-19
DHUGAAWWAN TALAALLII COVID-19
Talaalliiwwan mRNA COVID-19 akkamitti akka hojjetan
Talaalliin COVID-19 akkamitti hojjata
Talaallii COVID-19: Bu'uura
COVID-19 dhaaf Talaallii fudhachuu
Talaalliiwwan COVID-19 Akkamitti Hojjataman
Waa’ee Talaallii COVID-19 Gaaffilee Yeroo Heddu Gaafataman
Maaskii Keessan Nageenyaan Akkamitti akka Uffattan
Addan fagaachuu hawaassuma hujii irra oolchi, Maaloo - 8.5x11
Addan fagaachuu hawaassuma hujii irra oolchi, Maaloo - 11x17
Waldaan Hawaasa Oromoo Minnesota hawaasa isaatiif dhukkuba Vaayrasii Koronaa ilaalchisuun ergaa dabarseera.
COVID-19f qoratamuu/laalamuu (Oromo)
Mallattoolee COVID-19 (Oromo)
Ergaa PSA Iskiriina irraa kan Ayyaana COVID-19